UCID Vs Abaaraha: Waxaa halaag iyo dhib u sugnaatay, kuwa xoolaha Ummadda sida fudud u qaadanaya, If iyo Aakhirana ma liibaani doonaan | hubaalnewspaper
Luulyo 26, 2012
UCID Vs Abaaraha: Waxaa halaag iyo dhib u sugnaatay, kuwa xoolaha Ummadda sida fudud u qaadanaya, If iyo Aakhirana ma liibaani doonaan
Hargeysa ( Hubaal ) – Xisbiga Mucaaradka ah ee UCID ayaa Bulshada ugu baaqay in Fadliga bisha ramadaan loogu gurmaddo dadka iyo duunyadda ay tabaaleeyeen abaaraha kulul ee ka jira gobollada dalka qaarkood.
War-murtiyeed uu soo saaray xog-hayaha arrimaha gudaha xisbiga UCID Cabdirisaaq Maxamuud Saleebaan (Mingiste) ayaa lagu sheegay qaylo dhaan loo dirayo qaybaha bulshada, Hay’addaha samo-falka iyo ganacsatada dalka kuwaas oo loogu baaqayo inay ka qayb galaan gurmadka abaaraha baahsan ee saameeyay gobollada Awdal, Selel iyo Saaxil.
War-murtiyeedkaas oo nuqul kamid ahi soo gaadhay wargeyska Hubaal isagoo dhamaystiran waxa uu u dhignaa sidan: “Xisbiga UCID waa Xisbi u taagan cadaalada iyo daryeelka Ummadda reer Somaliland,waa Xisbi la qaybsada Shacabkiisa dhib kasta oo la soo gudboonaata sida aad marar hore oo badan markhaati uga tihiin waxaana ugu dambaysay gurmadkii iyo baaqii Musharaxa Xisbiga UCID ee Gobolada Galbeedka Somaliland.
Sida aad la wada socotaan ,waxaa lagu guda jiraa bishii barakaysneyn ee RAMADAAN,bishii naxariista iyo isu gargaarka.
Madaama ay jiraan ABAARO kulul oo xilligan lagaga soo qayliyey gobolada Salal—Awdal iyo Saaxil,kuwaas oo laga cabsi qabo in ay dhibaato weyn gaadhsiiyaan dadka iyo duunyada ku dhaqan goboladaas.
Madaama ay jiraan Caruur aad u fara badan ,oo isgu jirta qaar ku jira xarumaha AGOOMAHA iyo DERBI JIIF(DAN YAR),kuwaas oo iyana la sheegay in ay ku jiraan xaalad adag,una baahan in loo gurmada fadliga bisha RAMADAAN awgeed.
Madaama ay jiraan dad fara bada oo xanuuno kala duwan u jiifa CUSBITAALADA dalka,una baahan in in loo gargaaro fadliga bisha RAMADAAN awgeed.
Madaama ay jiraan MAXAABIIS fara badan oo ku xidhan Xabsiyada(Jeelasha) ,una baahan in loo gargaar bisdha khayrka badab ee RAMADAAN.
Madaama ay jiraan dad aad u fara badan oo DANYAR ah,kuwaas oo ay ku adag tahay in helaan nolol maalmeedka caadiga ah.
Haddaba madaama ay jiraan dhamaan xaaladaha adag ee aanu kor ku soo sheegnay, xilligan lagu jiro bishii RAMADAAN ee khayrka iyo sharafta badneyd ,waxaanu halka baaq samafal uga soo jeedinaynaa guud ahaan shacabka reer Somaliland, gaar ahaan inta uu baaqani sida tooska ah ugu socdo, anagoo si xushamad iyo naxariis leh uga codsanayna in ay GURMAD IYO TAAKULO deg deg ah la soo gaadhaan dhamaan qaybaha Bulshada ee aanu sida gaarka ah ugu xusnay BAAQAN SAMAFALKA AH.
Dhamaab Xafiisyada Xisbiga UCID ee Gobolada iyo Degmooyinka Somaliland ,waxaa lagu wargelinayaa in ay ka qayb qaataan gurmadkasta oo lagu badbaadinayo guud ahaan shacabka reer Somaliland,gaar ahaan dan yarta iyo inta jilicsan.
Waxaa halaag iyo dhib badani u sugnaatay, kuwa xoolaha Ummadda sida fudud u qaadanaya, Ifka iyo Aakhirana ma liibaani doonaan, mana badbaadi doonaan”. Ayaa lagu soo gunaanaday war saxaafadeedkaas oo uu ku saxeexan yahay xoghayaha arrimaha gudaha ee xisbiga UCID Cabdirisaaq Maxamuud Saleebaan (Mingiste).
← “Horta Gaadmo iskumaynu ogayne waad i gaadeen, Warkiin-na waan la Socday”-Saleebaan-Gaal oo Ka Qosliyay Dadkii soo Dhaweeyay
Maxay Xukuumaddu Ku Macnaysay Weerarkii Lagu Qaaday Ciiddamada Qaranka ee Aagga Sool-joogto?. →